Sida loo dhoofiyo iPhone Xiriirada in a VCF | vCards
Ma doonaysaa inay u dhoofiyaan xiriirada iPhone si aad u vCards (.vcf) sidii gurmad ah? Ama doonayaa inaan u dhoofiyo liiska xiriirada aad ka gurmad Lugood, waayo, aad badiyay aad iPhone? Wax kasta oo aad rabto, halkan qodobkan ku saabsan tahay in ay kuu sheegaan sida ay u dhoofiyaan xiriirada ka iPhone (macruufka 9 taageeray) si vCards ama faylasha VCF.
Halkan waxa aad leedahay laba talooyinka. Mid ka mid ah waa Wondershare TunesGo (Windows), Saaxiibka Lugood ah, taas oo kuu oggolaanaysa in aad wareejiso xiriirada iPhone in .vcf file, si ammaan ah. Kale waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta Mac iPhone) , qalab kabashada xogta macruufka awood badan ah, taas oo ah 100% ammaan iyo xirfadeed.
Xalka 1: xiriirada dhoofinta iPhone in .vcf file la TunesGo
Xalka 2: xiriirada Dhoofinta ka iPhone in vCard in Windows / Mac la Dr.Fone ee macruufka
Dhab ahaantii, Wondershare TunesGo waa si gaar ah loogu talagalay Saaxiibkiis Lugood. Waxa aad siisaa awood ay uga dhoofin oo dhan ama soo xulay xiriirada badbaadiyey on xasuusta iPhone, is-weydaarsiga, Yahoo !, iCloud, iwm si file hal .vcf badan ama faylasha vCard la eber khasaaro xogta. Ka sokow, aad dhoofin karo xiriirada iPhone in Outlook, Windows Live mail Address iyo Windows Book.
Download TunesGo oo isku day.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS marka ay ordaya macruufka 9/8/7/6 / 5. Hubi info dheeraad ah oo ku saabsan aaladaha Apple oo ay taageerayaan iyo nidaam looga baahan yahay .
Tallaabada 1. Run barnaamijkan iyo xiriiriyaan iPhone la PC
First of dhan, rakibi TunesGo Wondershare on your computer. Waxa maamula. Isticmaal iPhone ee USB cable in ay ku xidhmaan aad iPhone la PC. Your iPhone la ogaan doonaa ka dibna ku cad suuqa kala aasaasiga ah, sida shaashadda hoose.
Tallaabada 2. dhoofinta iPhone xiriirada si vCard
Sida aad ka arki, xog badan waxaa lagu muujiyey galeeysid bidix. Raadi "Xiriirada" tab iyo waxa guji. in ay category, waxaad ka arki kartaa xiriirada aad xasuusta iPhone, iCloud, Yahoo !, is dhaafsi, iyo xisaab kale. Dooro xiriirada aad jeclaan lahaa inay u dhoofiyaan. Guji "Import / Dhoofinta" inay soo qaadaan menu hoos-hoos ah. Haddii aad rabto in aad dhoofin dhammaan dadka ay khuseyso, guji "dhoofinta Dhammaan Xiriirada" Haddii aad go'aansato in aad u dhoofiyaan qaar iyaga ka mid ah, guji "Dhoofinta Xiriirada soo xulay".
Markaas, waxaad ka heli lix doorasho ee liiska la jiido hoos midig: "Si aad ah vCard File Single", "si ay u Multiple vCard Files" "Si Outlook Express", "Si Windows Live Mail", "Si Windows Cinwaanka Book" iyo "inay Muuqaalka 2003/2007/2010/2013 ". Dooro "Si aad file a Single vCard" ama "in la files vCard Multiple" oon helno waddo lagu badbaadiyo ku kaydiso vCard laga dhoofiyey si aad PC.
Fiiro gaar ah: Si aad u dhoofiyaan xiriirada badbaadiyey on your iCloud, Exchange, Yahoo! iyo xisaab kale, idinku waajibka ah inaad gasho, kuwaas oo xisaab on ayaguna iPhone aad.
Taasi waa tallaabooyinka ku saabsan sida loo dhoofin xiriirada iPhone in vCard. Fudud oo degdeg badan, miyaanay ahayn? Hadda, download TunesGo Wondershare in wax lagu qabto!
Xalka 2: xiriirada Dhoofinta ka iPhone in vCard in Windows / Mac la Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (dadka isticmaala Windows), ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) waxay ka caawisaa in la helo iyo dhoofin xiriirada aad ka iPhone in aad PC ama Mac, oo waxa keliya oo akhri xogta aad, marnaba ma ay xusuusan tahay ama wax kabadalaya xogta aad. Waxaad had iyo jeer tahay milkiilaha oo kaliya xogta iPhone aad. Waa maxay dheeraad ah, waxa aad bixisaa laba siyaabood oo loo dhoofin xiriirada iPhone sida vCard: waxa ay si toos ah u dhoofiyaan ka iPhone, ama waxa aad ka gurmad Lugood dhoofin.
Download tijaabo ah oo lacag la'aan ah ka hooseeya oo ku xidh on your computer in ay isku day ah.
Qeybta 1: xiriirada Dhoofinta ka iPhone in vCard / VCF File
Qeybta 2: Dhoofinta iPhone xiriirada si vCard / VCF kaga imaanayo Lugood
Qeybta 1: xiriirada Macdan iPhone in CSV
Ka hor inta wax kale samayn, xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka, oo ay maamulaan barnaamijka. Markaas waxaad heli doontaa interface weyn hoose iPhone iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4s.
Wixii iPhone 4 / 3GS, aad arki doonaa suuqa kala sidan oo kale. Click Download si aad u hesho a fur-in u qalab aad oo ay sii wadaan.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone xiriirada ku yaal
Si aad u iskaan xogta ku saabsan iPhone 4 / 3GS, waxaad geli lahaa hab iskaanka telefoonka ee. Waxaa Ma adigoo raacaya habka hoos ku qoran:
1. Ku qabo iPhone, iyo riix Start si ay u bilaabaan;
2. awoodda iyo Home badhamada waqti isku mid ah muddo 10 ilbiriqsi,
3. Fur button Power iyo sii riixaya badhanka Home for kale 15 ilbiriqsi, ilaa aad ka hesho nidaamka.
Haddii aad isticmaasho iPhone iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4s, waxaad si toos ah iskaan kartaa iPhone adigoo riixaya badhanka Start Scan ku furmo suuqa ugu weyn. Markaas barnaamijka bilaabi doonaan in ay si toos ah baarista iPhone.
Tallaabada 2. dhoofinta iPhone xiriirada si vCard file VCF /
Markii barnaamijka ka baxayo sawirka, waxa aad dib u siin doonaa warbixin scan. In warbixinta, dhammaan xogta ku saabsan iPhone waxaa lagu soo bandhigay qaybaha, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, qoraalo, iwm Waxaad iyaga ku eegaan karo in ay maraan baaritaan ah. Si aad u dhoofiyaan xiriirada iPhone in vCard, iyaga doortaan oo guji bogsadaan. Waxaad si fudud u dhoofin karo si aad u computer sida file VCF ah.
Waxa kale oo aad ka daawan kartaa tutorial video hoose.
Qeybta 2: Dhoofinta iPhone xiriirada si VCF / vCard kaga imaanayo Lugood
Tallaabada 1. Dooro gurmad Lugood in uu soo saaro
Marka aad halkan u joognaa, guji soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee suuqa kala aasaasiga ah ka dib markii aad u barnaamijka. Markaas waxaad heli doontaa daaqad hoos ku qoran. Dhammaan Lugood aad files gurmad on your computer ayaa lagu ogaaday. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan si ay u bilaabaan waxaa soo saarida.
Tallaabada 2. Warbixiinta gurmad iPhone xiriirada si VCF / vCard
Skaanka aad ku kici doonto dhowr ilbiriqsi. Ka dib markii in, dhammaan xogta ku saabsan iPhone (macruufka 9 taageeray) lagu soo saaro doonaa oo soo bandhigay qaybaha. Riix Xiriirada si loo hubiyo aad xiriirka la leedahay oo guji Ladnaansho si ay u dhoofiyaan sida vCard / file a VCF on your computer.
Sida loo dhoofiyo iPhone Xiriirada in CSV aan Lugood
iOS9 iPhone vs. Edge Samsung Galaxy qod6
Sida loo Hel Number Your Phone On Your iPhone
10 Waa-Have iPhone Photo Accessories
2 Talaabada Macdan kaabta iPhone in Windows 8
> Resource > iPhone > Sida loo dhoofiyo iPhone Xiriirada in VCF a / vCards